Ederede Eric Olson na Martech Zone |
Edemede site na Eric Olson
Abịa na mgbasa ozi mmekọrịta na ịzụ ahịa mmemme, ihe mmụta bụ: bido iji ya ugbu a - mana gbaa mbọ hụ na ị na-ege ntị tupu ị gawa. Ndị ọrụ mgbasa ozi karịrị ndị ọrụ email karịa ụwa niile afọ atọ gara aga na netwọkụ mmekọrịta na-eme atụmatụ ka ọ na-eto. Chee echiche nke mgbasa ozi mmekọrịta dịka ọwa nkwukọrịta karịrị ngwa nkwado ma ọ bụ ndochi mgbasa ozi. Otu na ọtụtụ nyiwe nkwukọrịta anaghị arụ ọrụ nke ọma. Yabụ inwe ihe ịga nke ọma na ụwa dijitalụ nke oge a chọrọ